Eyokuba uSomlomo isho ukuncelisa amawele – Msunduzi News
ISIKHUNDLA sokuba nguSomlomo kuMasipala singesibucayi, ikakhulukazi esimweni lapho kumele ulawule amaqembu kanye nosopolitiki nokungathi manxa ungacopheleli uzithole usugeje umgodi.
USomlomo akahlukile kunondweba ongumsingathi nomvikeli wayo yonke imithetho nenqubo elandelwayo eMkhandlwini. Phezu kwakho konke lokhu, uSomlomo ulindeleke ukuba angachemi futhi alimele iqiniso.
Njengoba iNingizimu Afrika ibuswa ngenqubo yamaqembu ahlukahlukene, nokusho ukuthi onke amaqembu asethubeni lokuba aqokelwe nokuba aqokele ukuba abe semkhandlwini. Lokhu kubeka inselelo kuSomlomo okulindeleke ukuthi eluse wonke lamaqembu ngokungachemi. IKhansela uNks uJabu Ngubo nguye owaqokelwa ukuba abe nguSomlomo eMsunduzi nokwabe kusho ukubekwa kwejoka lokuba ngumkhuzi wamakhandela onke nanokuba umuntu oqinisekisa ukulandelwa kwenqubomgomo kaMasipala kanye nemithetho eyengamele ukusebenza nokulawulwa koHulumeni bendawo.
Okwenza lo msebenzi ube bucayi ukuthi lo osuke eqokelwe kuwo, kusuke kungeyena umuntu ongenayo imibono noma izinkolelo zepolitiki ngaphezu kwalokho eseqenjini okungelikhulu ngobuningi kodwa alindeleke ukusebenzisa isikhundla sakhe ngokuzimela ukungachemi nokungenzeleli. Njengoba iNingizimu Afrika iyizwe elinedemokrasi enamaqembu amaningi lokho kuchaza ukuthi maningi futhi amaqembu angakhethwa aphathe izikhundla kunoma ibaphi oMasipala abakhona. Lokho kunikeza uSomlomo inselelo enkulu ngoba kufanele abhekane nezinkinga eziningi zezepolitiki okumele azixazulule ngokwemithetho emisiwe yezishayamthetho.
USomlomo kaMasipala uMsunduzi uJabu Ngubo uyikhansela elizithola likulesi simo esibucayi sokuhamba ngokucophelela uma lenza umsebenzi walo. Ukuhola uMkhandlu kuchaza ukwenza umsebenzi ngomqondo ovuthiwe nokuzethemba. Iqembu lakhe i-African National Congress njengoba kuyilona eliyiningi eMkhandlwini, kumele azithole encelisa amawele ngokuthi abhekelele amalungelo amaqembu aphikisayo afana neDemocratic Alliance, i-Inkatha Freedom Party ne-African Christian Democratic Party. Ukuze umuntu abe nesithombe esiphelele ngezinkinga abhekana nazo uSomlomo kufanele uke uvakashele eMkhandlwini uyobona okuqhubeka ngaphakathi. Lapho uSomlomo usuke elindeleke ukuphatha wonke amaqembu ngokungakhethi iphela emasini kodwa futhi kumele enze isiqiniseko sokuqhuba konke ngokulandela umthetho ngokungaxheguli. Lokhu sikubone ngokucacile kamuva nje sivakashele ngaphakathi eMkhandlwini kuneFull Council okwakungumhlangano owawuvulelekile emphakathini ubanjelwe eHholo leDolobha.
Amakhansela ayebhekene nokudingida i-Agenda eyayingumqingo wamakhasi inanezichibiyelo ezazihambisana nayo. Inkinga uSomlomo ayebhekene nayo kwaba wukuba phansi kwesibalo samakhansela okwakufanele athathe izinqumo emhlanganweni. Wayengenasiqiniseko senani elalanele ukuthi umhlangano woMkhandlu wawungaqhubeka uthathe izinqumo ngokusemthethweni. Kwake kwashuba ngendlela yokuthi ukuze kuthatheke izinqumo uSomlomo wazithola kufanele avimbe emnyango kungaphumi muntu ukuze izinqumo ezazizothathwa zime futhi zibe semthethweni.
Kuyenzeka amakhansela uSomlomo amthathe noma yikanjani ngezikhathi ezithile. Lapho-ke akachithi sikhathi ngokuwakhumbuza ukuthi kukhala esikabani isicathulo ezindlini zomkhandlu. Lokhu ukwenza ngisho kwabeqembu lakhe i-African National Congress. Ngenxa yokuthi amaphuzu okusuke kuzoxoxiswana ngawo asuke emaningi kwesinye isikhathi abe ngamakhasi abalelwa ezinkulungwaneni kumele kube nguye uSomlomo oqhumisa isitswebhu uma amakhansela esephuma esihlokweni esisuke sidingidwa esenkanta ngenkulumo. Lokhu usuke ekwenzela ukugcina isikhathi.
Njengoba iMeya iyinhloko kaMasipala ngokwepolitiki uSomlomo yena uyinhloko yoMkhandlu wonke. USomlomo ushaya amaphiko eMkhandlwini besekuthi iMeya yona ishaye amaphiko Esigungwini Esiphezulu (i-Exco) esishaya umthetho eMkhandlwini. USomlomo usizwa emsebenzini wakhe yiMeneja kaMasipala noMeluleki Wezomthetho kukho konke okuphathelene nomthetho. Bobathathu laba, uSomlomo, iMeneja kaMasipala noMeluleki Wezomthetho besizwa ngamakhansela kulokho okusuke kudingidwa aphinde amakhansela avote ukuze kufezekiswe lokho okusuke kudingidwe kwavunyelwana ngakho emkhandlwini. Konke okusuke kuzodingidwa kulethwa kuFull Council futhi kube yilo lolu hlaka olunqumayo ukuthi udaba oluyilolu hlobo luzoyiswa kuphi. Kwesinye isikhathi luqondiswa emakomitini ePortfolio ukuze nawo abeke uvo ngokusuke kudingidwa noma eSigungwini Esiphezulu i-Executive Committere (Exco) ngaphambi kokuthi kubuyiselwe eMkhandlwini ogcwele (Full Council) ukuze kuzogxotshwa kuvunywe okokugcina njengezinqumo esezingasebenza.
Previous post: UMsunduzi nethuba lesiqalo esisha sezakhamuzi
Next post: Umqeqeshi weMaritzburg City nesifi so sokubuyisa udumo